July 2017 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
राज सर्गमको नयाँ म्युजिक भिडियो ‘सम्झना आँखैमा ’ सार्वजनिक
July 31, 2017 July 31, 2017 rastrakhabar 0
राज सर्गम ले हालै आफुले गाएको एउटा नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
मार्मिक अनी सान्दर्भिक संगीत एवं रचना रहेको गीत ‘सम्झना आँखैमा ’ मा राज सर्गमले आफ्नो स्वर भरेका छन् ।
गणेश चौधरिले एरेञ्ज गरेको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा नारायण गुरुङ, बिपन राउत , दुई बर्षाको सानो बालक वङेल स्याङ्देन र बिरु स्याङ्देन ले अभिनय गरेका छन् भने यस गीतको को निर्देशन , छायाँकन तथा इडिटिङ दीपक बोम्जन्ले गरेको हो ।
VH VIDEO PRODUCTION HOUSE NEPAL द्वारा बनेको यो भिडियो HILIGHTS NEPAL ले बजारमा ल्याउने काम गरेको छ ।
अनिताले सम्झिन माईती (भिडियो सहित)
July 31, 2017 rastrakhabar 0
तिजको रौनक हरेक वर्ष तिज आउनु भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै देख्न सकिन्छ । महिलाहरुको विशेष पर्व तिजको आगमनसंगै तिज गितको बजार पनि निकै बढ्ने गरेको छ । सांगितीक क्षेत्रमा पूर्ण व्यवसायिक रुपमा लागेका गायक गायिका हुन वा सौखका रुपमा आएका हुन प्रत्येकले तिज लक्षित गीतलाई महत्वपूर्ण रुपमा समेट्ने कोशिस गरेका नै हुन्छन । यसैक्रममा नेपाली संचार क्षेत्रमा लामो समय देखि संचारक्षेत्रका चिर परिचित तथा नेपाल टेलिभिजनका चर्चित समाचार वाचिका एवं नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष अनिता विन्दुले तिजको अवसरमा प्रत्येक वर्ष झै यो वर्ष पनि तिजको गीति एल्बम बजारमा ल्याएकी छिन । आमा दिदी बहिनीको पीर व्यथा समेटेर तिज गीत बजारमा ल्याएकी छिन । अनिताको यस गितको भिडियोलाई भने साई भिजन प्रा.लि.ले निर्माण गरेको हो । नेपाली मौलिकता बोकेको र महिला दिदी बहिनीहरुको महान चाड तिज पर्वमा हिन्दु नारीहरुलाई सम्झना तथा माया स्वरुप तिजका गितहरु प्रत्येक वर्ष वजारमा ल्याउने गरेको अनिताको यस गितलाई निकै रुचाईएको छ ।
आफ्नो कर्मक्षेत्रमा निकै व्यस्तताका बावजुद सांगितीक क्षेत्र तर्फ उतिकै रुचि राख्ने अनिताले आफ्नै स्वरमा रहेको लोकनाथ सापकोटाको शव्द लयमा “प्यारो माईती” नामक एल्बम बजारमा ल्याएकी छिन । मौलीक भाखामा तीज गीत अभाव रहेको समयमा अनिताले तिज गीत रुचाउने दर्शक श्रोताहरुका लागि प्यारो माईती शिर्षकको मौलीक पाराको तीज गीत एउटा उपहार ल्याएकी छिन ।
Tagged Anita Bindu
मिसेस तिज २०७४ को अडिसन सम्पन्न
July 29, 2017 rastrakhabar 0
राष्ट्रिय नृत्य महोत्सवको आयोजना हुदै
नृत्य निर्देशक संघ नेपालको प्रथम वार्षिकोत्सव तथा स्थापना दिवसको अवसरलाई सभ्य तथा भव्य रुपमा मनाउन राष्ट्रिय नृत्य महोत्सव २०७४ को आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा नेपालका पूर्व मेचि देखी पश्चिम महाकाली सम्मका विभिन्न जनजाती समुदाय, भाषाभाषीहरुको नेपाली कला र संस्कृति साथै विभिन्न लोक गीत, लोक भाका,लोक संगीत, आर्कषक भेषभुषा सहितको झांकी र नृत्यहरुको प्रस्तुती रहने कार्यक्रम संयोजक तथा नृत्य निर्देशक संघ नेपालका सहसचिव रवि राना मगरले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका लागि ललितपुर जिल्ला व्यापी परम्परागत शास्त्रिय चर्या नृत्य प्रतियोगिता श्रावन २१ गते ललितपुरमा आयोजना हुने छ भने भक्तपुरबाट भक्तपुर जिल्ला व्यापी अन्तर विद्यालय नेवार लोक नृत्य प्रतियोगिता भक्तपुरमा श्रावन २० गते हुने छ । यसै गरि सोही महोत्सवका लागि काठमाडौ जिल्लाबाट काठमाडौ जिल्ला व्यापी तामाङ्ग लोक नृत्य प्रतियोगिता श्रावन २१ गते बौद्धमा आयोजना हुने कुरा काठमाडौं जिल्ला व्यापी लोक नृत्य प्रतियोगिताका संयोजक केशव कोईरालाले जानकारी दिनु भयो । तिनै जिल्लाका उत्कृष्ट प्रतियोगिहरुलाई महोत्सवमा सहभागी गराईने संघका उपाध्यक्ष प्रदिप मान श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रमलाई सफल वनाउन दिन रात अहोरात्र खटिरहनु भएका संघका पदाधिकारीहरुले महोत्सव भव्यताका रुपमा सफल हुने र नेपाली लोक नृत्यलाई विदेशमा चिनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास रहेको कुरा वताउनु भयो ।
नृत्य निर्देशक संघ नेपालको स्थापना २०७३ साउन २६ गतेका दिन विधिवत दर्ता भएको संस्था हो । नृत्यकर्मीहरुको हक र हितका लागि नृत्य क्षेत्रमा अनवरत रुपमा लागि रहनु भएका नृत्यका सर्जक , श्रष्टा नृत्य गुरुहरुलाई सम्मान गर्ने दिवगंत नृत्य गुरुहरुको जीवनीमा आधारित अभिलेख तयार पार्ने, नव प्रतिभाहरुलाई हौसला स्वरुप कदर गर्दै सम्मान गर्ने , नेपाल अधिराज्यभर छरिएर रहेको पेशाकर्मी नृत्य निर्देशकहरुलाई विभिन्न शाखाहरुको विस्तार गरेर एकै ठाउमा आवद्ध गराउने, नेपाली शास्त्रीय तथा लोक नृत्यहरुको अनुसन्धान गर्नुको साथै कार्यशाला गोष्ठीहरुको आयोजना गर्ने गराउने लगायतका कार्ययोजना तथा उद्धेश्य संघको रहेको जानकारी संघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । आगामी साउन २६ मा १ वर्ष पुगेको अवसरमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो ।
नृत्य निर्देशक संघ नेपालले यस अघि नृत्य गुरु बा भैरब थापा सम्मान सांझ २०७३ कार्यक्रम आयोजना गरि श्रष्टा थापालाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको थियो । २०७४ वैशाख १६ गते अन्तरराष्ट्रिय नृत्य दिवस २०१७ को अवसर पारेर ५ जना नृत्य सर्जकहरुलाई नगद पुरस्कार सहित एवं नवयूवा प्रतिभा नृत्य निर्देशकलाई पनि सम्मान गरेको थियो । सोही अवसरमा सम्मानित नृत्य गुरुहरुको जीवनीमा आधारित स्मारिका प्रकाशन गरि विमोचन गरेको थियो । कार्यक्रममा वाङ्गमय शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी वरिष्ठ गीतकार रत्न शमसेर थापा र वरिष्ठ नृत्य सर्जक भैरव बहादुर थापाले उक्त स्मारिका विमोचन गरेका थिए ।
भैरव वहादुर सम्मान सांझमा
अन्तराष्ट्रिय नृत्य दिवसको कार्यक्रममा
“नृत्य हाम्रो अभिमान कला र संस्कृतिको पहिचान” भन्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको संघले आफ्ना क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तित्वहरुलाई आपत विपतका घडिमा पनि उत्तिकै साथ समर्थन गर्दै आईरहेको र सोही अनुरुप सतार नृत्यका सर्जक नाट्यश्वर नृत्य कला प्रशिक्षण केन्द्र विराटनगरका वरिष्ठ नृत्य गुरु कामेश्वर झालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि संघले आर्थिक सहयोग स्वरुप दश हजार समेत प्रदान गरेको संघका अध्यक्ष भुवन दास श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।
नेपालमा नेपाली विषयको विजोग
July 27, 2017 August 9, 2017 rastrakhabar 0
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एसईई परीक्षाको नतिजा हेर्दा अनिवार्य नेपाली विषयमा विद्यार्थीहरुको अवस्था निकै कन्त विजोग देखिएको छ । झन्डै साढे चार लाख विद्यार्थीले यसपालीको परीक्षा दिएका थिए । जसमध्ये १८१ जनाले नेपाली विषयमा ए प्लस ल्याए । त्यस्तै अंग्रेजी विषयमा भने नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले ए प्लस ल्याउन सफल भए ।
आजभोली अन्य विषयमा भन्दा नेपालीमा विद्यार्थीहरु निकै कमजोर अवस्थामा रहेको प्रष्टै छ । मेरी ६ वर्षकी छोरीको पनि हालत त्यहि छ । अंग्रेजी सरासर लेख्ने उनी नेपालीको होमवर्क गर्नुपर्यो भने पेट दुख्यो भन्न थाल्छिन् । यतिसम्म की लौन मलाई निन्दाले च्याप्यो भन्ने जस्ता अनेक बहाना गर्छिन् । आँखिर १ कक्षाकै बच्चाले यस्तो किन गर्छन् ? यो खोजको विषय हुनु जरुरी छ । यसमा अन्तराष्टिय भाषाको प्रभाव मुख्य कारक हुनसक्छ भने आजभोली विद्यालयमा नेपाली भाषालाई महत्व नदिएका कारण पनि बालबालिकाका कमजोर भएका हुन् ।
अंग्रेजी जान्नु राम्रो कुरो हो । तर यसो भन्दैमा आफ्नो मातृभाषालाई कमजोर बनाउँदै लानु पक्कै पनि राम्रो होईन । आजभोली अंग्रेजी भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउने गरिएको छ । आजकाल त विद्यालयमा नेपाली बोल्यो भने शिक्षकबाट विद्यार्थीले सजाय नै पाउने चलन छ रे । यस्तो भएपछि हाम्रा बालबालिकाको नेपाली कसरी राम्रो हुन्छ ?
नेपाली विषयप्रति अभिभावक सचेत तथा संवेदनशील बन्ने बेला आईसकेको छ । तर छोराछोरीले अंग्रेजी फररर बोलेको देख्दा औधी खुसी हुने हामी नै हौं । खुसी हुनु नराम्रो होईन तर छोराछोरी नेपालीमा कमजोर भए केहि छैन भन्ने अनि अंग्रेजी बोल्दा खुसी हुने हाम्रो सोचबाट बालबालिका पनि प्रभावित बन्दै गएका हुन् । अभिभावकहरूको पनि नेपाली त गरिहाल्छन् नि, अरु विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको देखिन्छ । अब त यस्तो बेला आइसक्यो की नेपाली विषयको ट्युसन अनिवार्यरुपमा पढाउनैपर्ने नपढाए विद्यार्थी फेलै हुने । हामी हाम्रो भाषामा कमजोर हुनु भनेको परनिर्भर बन्नु हो । यसबाट हाम्रा भावी पीढिले हाम्रो भाषा विर्सनेछन् ।
विद्यालयले नेपाली विषय शिक्षकप्रति खासै राम्रो व्यवहार गर्ने गरेको पाईन्न । विषयगत दक्षता नभएकालाई नेपाली पढाउन दिइन्छ । नेपाली सजिलो विषय हो र यो सामान्य व्यक्तिले पनि पढाउन सक्छ भनेर जसलाई पनि पढाउन दिने चलनका कारण पनि विद्यार्थीको नेपाली कमजोर भएको हो । तर सानो कक्षाका विद्यार्थीलाई भाषामा जति पोख्त शिक्षकले पढाउँछन् त्यतिनै उनीहरु तगडा हुँदै जान्छन् । भाषा सिकाइका लागि विद्यार्थीमैत्री वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । विद्यार्थीमा भाषिक सीप विकासको लागि स्वयं विद्यार्थीलाई नै बोल्न, पढ्न र लेख्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ विद्यार्थीले नेपालीमा कुरा गर्नसमेत नपाउने अवस्था छ ।
नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा हो । यो सम्पर्क भाषा हो, साथै सूचना र सञ्चारको भाषा हो । यतिमात्रै होईन सरकारी कामकाजको भाषा पनि हो । भाषा खाली विद्यालयको कितावसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । नेपालीहरूको धर्म, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराहरुसँग समबन्धित छ । हाम्रो भाषा जोगाउनका लागि विद्यालय, अभिभावक लगायत सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
कल्पना शर्मा, सम्पादक, नवीन सन्देश
रुदीखोलामा बस खस्यो, दुई जनाको मृत्यु
July 27, 2017 rastrakhabar 0
कास्की र लमजुङ जोड्ने लमजुङको मध्यनेपालको मोटरेवल पुल भाँचिएर बस खोलामा खस्दा २ जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । पोखराबाट कास्कीको बिलुवावेशी जाँदै गरेको ना ५ ख ६३९५ नम्बरको बस लमजुङको सीमाक्षेत्र रुदी खोला तर्ने क्रममा पुल भाँचिएपछि खोलामा खसेको थियो ।
खोलामा खसेको बसले च्यापिदा २ जना यात्रुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा लमजुङ कोहोला सोथर गाउँपालिका चरागाउँका ५० वर्षीय खेमबहादुर गुरुङ र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का ५५ वर्षीय गाइने विक छन् । उनीहरुको शव बसले च्यापिएको ठाउँबाट निकालिएको कास्कीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक खड्कबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा घाइते भएका २७ मध्ये गम्भीर घाइते भएका ९ जनालाई पोखरा ल्याइएको छ । पोखरा ल्याइएका मध्ये कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ की सुशीला गुरुङको अवस्था गम्भीर रहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । उनको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य १८ जनाको भने स्थानिय अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । बेपत्ता एक जनाको भने पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
पोखरा ल्याइएका अन्य ८ जना घाइतेहरुमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ की स्मृति गुरुङ, लमजुङ चरागाउँकी टीका क्षेत्री, लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिकाका मंगलबहादुर विक, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर ३० का कृष्ण रिजाल, लमजुङ पसगाउँका पूर्णबहादुर गुरुङ, लमजुङ भोजेका लक्ष्मण गुरुङ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका प्रस्याङका डिल्लीराम लामिछाने र उनकी ७ वषिर्या छोरी मनिका लामिछाने रहेका छन् । उनीहरु सबैको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ ।
विदेशमा उत्पादन हुने सौन्दर्य सामग्रीहरु नेपालमा आउने क्रम बढेको छ । यहि क्रममा पोल्याण्डमा उत्पादन हुने पायस ब्राण्डको कस्मेटिक सामग्री नेपालमा विक्रि वितरण गर्ने कृष्णभक्त इन्टरप्राजेजका प्रबन्ध निर्देशक सल्चना ख्याजुसंग नेपालमा कस्मेटिक सामग्रीको बजार अवस्था र समस्याका बारेमा मनोज थापाले गरेको कुराकानी :
तपाईको कम्पनिको बारेमा भन्दिनुस् न ?
कृष्णभक्त इन्टरप्राइजेजले पोल्याण्डमा उत्पादन भएको पायस ब्राण्डको कस्मेटिक सामग्री नेपालमा ल्याएर विक्रि वितरण गर्ने कम्पनि हो । राइस पाउडर, बम्बु पाउडर, अर्गान आयल, फिरम वेल जस्ता उत्पादन नेपालमा विक्रि गर्ने हो ।
तपाईले नेपालमा ल्याउन लाग्नु भएको कस्मेटिक सामग्रीको फाइदाहरु के के छन् ?
छालालाई कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी गर्दैन । यसको प्रयोगले छालालाई राम्रो बनाउँदछ । सबै प्रकारको छालामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै साईड ईफेक्ट गर्दैन । प्रयोग पछिको परिणाम पनि सोचे जस्तो हुन्छ ।
नेपालमा यसको बजार कस्तो देख्नु भएको छ ?
नेपालमा सौन्दर्य सामग्रीको निकै ठुलो वजार छ । हरेक दिन प्रयोग हुने सामाग्री भएकोले यसको प्रयोग संख्या पनि अझ बढ्ने देखेर नै नेपालमा भित्र्याउन लागेका हौं । जतिले प्रयोग गर्नु भएको छ राम्रो भन्नु भएको छ । जसको कारण पनि नेपाली बजार राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।
अन्य कम्पनिहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?
प्रतिस्पर्धा निकै छ । अझ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । भारतबाट अहिलै निकै गुणस्तरहिन कस्मेटिक उत्पादनहरु भित्रिरहेका छन् । जसको वजार मूल्य पनि सस्तो छ । तर त्यसले पु¥याउने क्षति भने निकै भयावह हुन्छ । तर पनि ग्राहकहरु सचेतना पनि क्रमिक रुपमा बढदैछ । अचेल ब्राण्डलाई नै रुचाउन थालेका छन् । त्यसकारण हामीले ल्याउन लागेको कस्मेटिक सामानहरु राम्रो, गुणस्तरिय र कुनै प्रकारको हानी नगर्ने भएको हुँदा अन्य कम्पनिको उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।
तपाईहरुको लक्षित वर्ग कुन हो ?
हाम्रो लक्षित वर्ग भनेको सौन्दर्य सामग्री प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण नै लक्षित वर्ग हो । मध्यम वर्ग भन्दा केहि माथिका ग्राहकरुले निकै प्रयोग भएको युरोप तिरको आंकलन भए पनि नेपालमा मध्यम वर्गहरुमा पनि अहिले गुणस्तरीयतालाई वढी ध्यान दिने ग्राहकहरु बढ्दो भएकोले वहांहरु पनि यो ब्राण्डका लक्षित वर्ग हुन ।
बजारीकरण गर्नका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
अहिले व्युटिपार्लरहरुमा केन्द्रीत गरेका छौं । किन भने प्रयोगकर्ता त्यहाँ नै मेकअप गर्न आउने भएको हुँदा हाम्रो उत्पादनको बारेमा ग्राहकहरुलाई थाहा हुन्छ र खरिद गर्नु हुन्छ । र यहि ब्राण्डको माग गर्नु हुन्छ । सजिलैसंग वजार विस्तार गर्न सहज हुन्छ । अनलाईन मार्फत बजारमा विक्री वितरण गरिने छ ।
कतिको महंगो छ ?
नेपाली बजारमा भएका गुणस्तरीय कस्मेटीकहरुको तुलनामा सामान्य नै हो । महंगो खासै छैन् । तर हाम्रा सामाग्रीहरु गुणस्तरियता र राम्रो उत्पादन केहि महंगो हुनु स्वभाविक हो । नेपाली बजार अनुसारको दर रेटमा हामी विक्री वितरण गर्छौ ।
ब्राण्डेड सामग्री भएको हुँदा ढुक्क भएर प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु । नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको गुणस्तरतामा निकै ध्यान दिएको युरोपमा लोकप्रिय ब्राण्डको रुपमा परिचित पायस ब्राण्डलाई प्रयोग गरेर हेर्न अनुरोध गर्दछु ।
July 27, 2017 July 27, 2017 rastrakhabar 0
महिलाहरुको महान चाड तिज आउन केहि दिन मात्र बाकि हुदा तिज गितहरुको भिडियो निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ । बजारमा तिज गितहरुको अडियो विमोचन र भिडियो रिलिज प्राय हरेक जसो दिन हुन थालेका छन् , यसै बीच लोक गायक तोप शाही समुन्द्रको लय शब्द मा मौलिक तिज गित मोहोर मान घ्यु बजारमा आयको छ , जसमा तोप शाही समुन्द्र र निर्मला शाही समुन्द्र को स्वर रहेको छ , तन बुढो भए पनि मन बुढो हुदैन भन्ने भाव मा बनेको यो गित को भिडियो लाई थुप्रै म्युजिक भिडियो र चलचित्र निर्देशन गरेका शिव शर्मा ले निर्देशन गरेका छन् , गीतको मर्म लाई मर्न नदिई भिडियो मा कमेडी र नृत्य लाई बिशेष महत्व दिएको शिवले बताए , यस्तै गित र भिडियो निकै राम्रो बनेकोले आफु यस गितबाट निकै आशावादी रहेको गायक तोप शाही ले जानकारी दिए , भिडियोमा चर्चित कलाकार तथा हाक्काहाक्की टेलिचलचित्रका विभिन्न कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । गित हिमासंझौता डिजीटल को युट्युब च्यानल बाट सार्वजनिक भएको छ । भिडियो हेर्नुहोस :
‘इन्टिमेट’ लिएर आए डेभिड
काठमाडौं, गायक डेभिड शंकरले आफ्नो जन्मदिनमा ‘इन्टिमेट’ लिएर आएका छन् । मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच उनको दोस्रो एल्बम ‘इन्टिमेट’ सार्वजनिक गरिएको हो । बरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको प्रमुख आतिथ्यमा चुडामणि देवकोटा, सङ्गीतकार राजु सिंह, महेश खड्का, विकास चौधरी, लोक गायक तुलसी पराजुली, शंकर अधिकार ‘घायल’ पत्रकार डब्बु क्षेत्री, डेभिडका बुबा भवानी शंकरलगायतले एल्वम विमोचन गरेका थिए ।
‘इन्टिमेट’मा ‘म तिम्रो यादमा रुन पनि नसक्ने…’ ‘तिमीले सुनेऊ र…’, ‘आज आफ्नै जिन्दगीमा…’, ‘आइकम बिकम…’, ‘छम् पाउजुको तालैमा…’ जस्ता पाँच गीत रहेका छन् । एल्वममा रहेका गीतमा डम्बर नेपाली, फराज अर्पण, बिकास चौधरी, शंकर अधिकारी ‘घायल’ पुरन थापा र डेभिड आफैँको शब्द, सङ्गीत रहेको छ ।
कार्यक्रममा अतिथिहरुले उनलाई शुभकामाना दिएका थिए भने जन्मदिनको अवसरमा बजारमा आएको ‘इन्टिमेट’ले राम्रै चर्चा पाउने दाबी गरेका थिए । ‘आफ्नो सन्तानको प्रगतिमा खुशी छु, आज मेरो यो सवैभन्दा खुशीको क्षण हो’, डेभिडका बुबा भवानीले भने ।
‘मैले सपनामा प्रेम ध्वज प्रधानलाई देखिरहेको र आफ्नो एल्बम उहाँकै हातबाट सार्वजनिक गर्न पाउदा खुशी छु’, डेभिडले भने । ‘मलाई दर्शक–स्रोताले माया गरिरहनु भएको छ, अझ बढी माया गर्नुहुनेछ ‘इन्टिमेट’लाई’ उनले आशा व्यक्त गरे । उक्त अवसरमा एल्बममा समाबेश आइकम बिकम बोलको गीतको भिडियो सहित उक्त गीतको भाबको डकुमेन्ट्रि पनि सार्वजनिक गरिएको गरिएको थियो । फराज अर्पणले निर्देशन गरेको डकुमेन्ट्रिमा डेभिडले नै अभिनय गरेका छन् ।
सुगम सङ्गीतमा आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगेका डेभिड पछिल्लो समय चलचित्रको पाश्र्व गायनमा पनि सक्रिय छन् । २०६२ सालमै पाँचथर आइडलको उपाधि जितेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा सक्रिय गायक शंकरले २०६४ सालमा पूर्वाञ्चल आइडलको उपाधि जितेपछि पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । उनको पहिलो एल्बम ‘माई ड्रिम्स’ २०६८ सालमै बजारमा आएको थियो ।